December 2019 - Page 2 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 22, 2019 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sideed qof ayaa ku geeriyootay qarax ka dhan ahaa taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo fiidkii Sabtida. Qaraxa ayaa ku bilaabmay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa oo […]
Abwaanka ruugcadaaga ah ee Soomaaliyeed Cabdulqaadir Cabdi Shube oo loo magacaabay agaasimaha tiyaatarka qaranka
December 21, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Abwaanka ruugcadaaga ah ee Soomaaliyeed Cabdulqaadir Cabdi Shube ayaa loo magacaabay agaasimaha tiyaatarka qaranka, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday wasiirka warfaafinta, hidaha iyo dhaqanka, iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya. Abwaan […]
Soomaaliya oo ku rajo weyn in deynta laga cafiyo bisha Febaraayo 2020
December 19, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa rajaynaysa in bisha Febaraayo ee sanadka 2020 laga cafin doono deynta lagu leeyahay. Wasiirka maaliyada dowladda federaalka Soomaaliya oo shir jaraaid ku qabtay Muqdisho maanta oo Khamiis ah ayaa sheegay in […]
December 18, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada difaaca Puntland ee PSF ayaa fashiliyay qarax iyo miinooyin gudaha magaalada Boosaaso ay ku aaseen kooxaha argagixisada ah. Ciidamada ayaa ku guuleystay howlgakaas saakay oo Arbaco ah ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarada Djibouti ayaa duulimaadyo ka bilaabi doonta garoonka diyaaradaha ee Garoowe, sida ay sheegtay. Diyaarada oo ay leedahay dowladda Jabuuti ayaa asbuuciiba labo duulimaad ka bilaabi doonta Garoowe dabayaaqada bishan December, sida ay […]
December 16, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda. Guddiga ayaa codsigii ugu horeeyay ka guddoomay xisbi lagu magacaabay Hogaanshe maanta oo isniin ah. Guddiga ayaa fiidnimadii Sabtida magaalada Garoowe ku […]
December 15, 2019 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Transitional Puntland Electoral Commission launched its strategic plan on Saturday, at an event held in Garowe. According to a statement issued by the commission, the registration of political parties will be opened from […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa fiidnimadii Sabtida soo bandhigay qorshe howleedkooda, munaasibad lagu qabtay Garoowe. War-saxaafadeed ay soo saareen guddiga ayay ku sheegeen in laga bilaabo 15-ka December ay bilaambi doonaan […]
Madaxweynaha Puntland oo wasiirka maaliyada Itoobiya kulan kula yeeshay Addis Ababa
December 14, 2019 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wasiirka maaliyada ee Itoobiya Axmed Shide kulan kula yeeshay magaalada Addis Ababa. Waxay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac u dhaxeeya ee arrimaha ganacsiga, amniga […]
Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beelood gudaha gobolka Mudug oo xabad joojin la dhex dhigay
December 12, 2019 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal u dhaxeeya labo beelood gudaha gobolka Mudug ayaa lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo. Taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa gelinkii dambe ee Arbacada […]
Madaxweynaha Jubbland oo rajo ka muujiyay shirka Garoowe ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa rajo ka muujiyay shirka lagu balansanyahay Garoowe ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Isaga oo ka hadlayay magaalada Kismaayo maanta oo Khamiis ah, Axmed Maxamed [...]